8 ခွေးတစ်ကောင်ကိုဆုမပေးခင်မေးခွန်းများ ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ခွေးတစ်ကောင်ကိုအားမပေးခင်သင့်ကိုယ်သင်မေးရန်မေးခွန်း ၈ ခု
Lourdes Sarmiento | | ခွေးများနှင့်ခွေးများကိုအစာကျွေးခြင်း
ခွေးအတွက်ဆုလား Trinkets များအတွက်ကောင်းသောကိရိယာများဖြစ်ကြသည် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုဆုချပါဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်သောအခါသို့မဟုတ်အမိန့်ကိုနာခံရသောအခါ။ ဒါကောင်းတယ် သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေရန်နည်းလမ်း ယေဘုယျအားဖြင့်။
သို့သော်အချို့ရှိပါသည် လျှောက်ထားခံရဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသင့်ခွေးကိုလက်ဆောင်မပေးမီမိမိကိုယ်ကိုမေးရန်မေးခွန်း (၈) ခုရှိပါသည်။
1 ၁။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးအားမည်သည့်သကြားလုံးများသို့မဟုတ်ဆုများပေးသနည်း။
2 ၂။ သကြားလုံးများကိုမည်သို့ဖြန့်ဝေရမည်နည်း။
3 ၃ / အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား။
4 ၄။ ငါကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေးလို့ရမလား။
5 ၅။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာရှိလား။
67/ utility ကိုအပျော်အပါးနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရမလား။
7 ၈။ အဘယ်အာဟာရများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသင့်ပါသလဲ။
အဆိုပါကာလအတွင်း တိရိစ္ဆာန်သင်ယူမှု, သူသည်ကုသမှုသည်ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သူနာခံသောအခါသင်သူ့ကိုပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးသင်၏အမူအယာကိုပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုနားလည်ရမည်။
စမ်းသပ်ခြင်း ကွဲပြားခြားနားသော trinkets မည်သည့်အရာကိုသူ ပို၍ နှစ်သက်သည်ကိုကြည့်ပါ။ အဲဒါသူ့ကိုသင်ပေးဖို့သုံးမယ်။
ကြောင်းပေးထား သကြားလုံးများသည်ကယ်လိုရီဖြစ်သည်သင့်ခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားလိုပါသလဲ။ အားရစရာတွေကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးသင်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်အပိုင်းအစတစ်ခုပေးပါ။ ဒါ အဝလွန်ကိုကန့်သတ် ခွေးကိုပျော်ရွှင်စေပြီးတစ်နေ့သင်သူ့ကိုမည်မျှပေးကြောင်းသတိရပါကကန့်သတ်ချက်ကိုမကျော်ပါနှင့်!
၃ / အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား။
သင်ဝယ်ရန်မလိုအပ်ပါ သင့်ရဲ့ခွေးဆုချ။ ဒါကတတ်နိုင်သမျှတစ်ခုတန်ဖိုးထားလက်ဟန်ခြေဟန်ဖြစ်သော်လည်း လင့်များဖန်တီးပါ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူ, ဘာမျှသင်၏ချစ်ခင်အစားထိုးလိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောစကားလုံးသို့မဟုတ်ချစ်ခင်တွယ်တာသောအမူအရာသည်အကြီးမားဆုံးသောဆုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ပုံမှန်အစားအစာလိုပါပဲ ဒါကြောင့်ကျန်ကြွင်းပေးရအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး သင့်ရဲ့အစားအစာကနေသင့်ရဲ့ခွေးရန်။ မကြာခဏ "လူ့" အစားအစာများ နံ့သာမျိုး၊ နှင့်အစာခြေစနစ်အဘို့အခြားနိုင်ငံခြားအေးဂျင့်များ။
သင်၏ခွေးကလေးကိုကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့်စဉ်းစားပြီးသူ့ကိုကြားနေအစာကျွေးပါ။ စပျစ်သီး၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူကိုရှောင်ပါ အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာသို့မဟုတ်အခြားအဆိပ်သင့်အစားအစာများ။
နောက်တစ်ခေါက်ဥပမာကိုကြည့်ရအောင် လူသားများအတွက်အစားအစာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဟာပစ္စည်းစာရင်းကိုမဖတ်ဘဲစည်သွပ်ဘူးတစ်ဘူးကိုမဝယ်ချင်ဘူးလား။ ခွေးတွေအတွက်တော့အတူတူပါပဲ ဆားနှင့်အဆီအဆင့်များ မမြင့်ဘူး ရှောင်ကြဉ်ပါ ဥရောပပြင်ပမှာထုတ်လုပ်အစားအစာအတိတ်ကာလအဆိပ်ပြproblemsနာများဖြစ်ရပြီအဖြစ်။
ဝေါဟာရ "အော်ဂဲနစ်»စိတ် ၀ င်စားသောပိုင်ရှင်များကိုကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအသောက်များကိုသွေးဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်မည်သည့်ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသည်ကိုသေချာမသိပါကသင့်အားအမြဲမေးမြန်းနိုင်ပါသည် VET သတင်းအချက်အလက်အချို့
7 / utility ကိုအပျော်အပါးနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရမလား။
ကူညီနိုင်သောကုသမှုများစွာရှိသည် ကျောက်ကပ်နှင့် gingivitis တိုက်ဖျက်။ နောက်တဖန်မေးလျှင်၊ သာ၍ ကောင်း၏ သင်၏ VET မှအကြံဥာဏ်, ဒါပေမယ့်ဥရောပထုတ်ကုန်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။
များစွာသောအခြားထုတ်ကုန်များသည်ရောဂါအချို့ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုကြသည် သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ သင့်ရဲ့ခွေး၏။ ဒီရှိမရှိပြသရန်အဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုလည်းမရှိ မှန်လားမှားလားသင်၏ vet နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ခွေးပြီးသားတစ် ဦး အောက်ပါလျှင် အထူးအစားအစာ, ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည်ခံစားနေရပြီး, သင်သည်ဤထုတ်ကုန်နှင့်အတူအလွန်သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အစားအစာကိုအသုံးပြု။ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်«hypoallergenic"။
trinkets မှကောင်းတစ် ဦး ဆင်ခြေရှိပါတယ်ပေမယ့် မင်းရဲ့ခွေးတစ် ဦး အဘို့အကောင်းတစ် ဦး ဆင်ခြေမရှိကြပေ ဟန်ချက်ညီတဲ့အစားအစာ.
ရှာဖှေ ကျန်းမာမျှတသောသို့မဟုတ်အိမ်လုပ်သကြားလုံးများ။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုအစီအစဉ်များတွင်မကြာခဏရေးသားလေ့ရှိပြီးပြည့်စုံသောအရာများကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည် ဗီတာမင်နှင့်အာဟာရ သင့်ရဲ့ခွေးကိုအဆင်ပြေအောင်။
သင်သည်သင်၏ခွေးပေးနေစောင့်ရှောက်လျှင် စက်မှုရယူထားသော, ထိုအစားအစာအမျိုးအစားနှင့်သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းမပြုရ! တစ်နေ့လျှင်စားသုံးမှု၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာစားသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများနှင့်ခွေးများကိုအစာကျွေးခြင်း » ခွေးတစ်ကောင်ကိုအားမပေးခင်သင့်ကိုယ်သင်မေးရန်မေးခွန်း ၈ ခု
Saint Bernard ၏ဒဏ္theာရီနှင့်စည်အကြောင်း
ငါ့ခွေးကနေ pups ရဖို့ကိုဘယ်လို